Indonesia in Focus: Mina musiibo iyo saddex Masiirka.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (376)
(Qaybta saddex boqol iyo lix iyo toddobaatan), Depok, West Java, Indonnesia, September 24, 2015, 21:55 pm).
Musiibadii ka dhacay mar kale xajka ee Mina, Saudi Arabia, markii dad sodcaal ah ay doonayeen in ay ku tuuraan Jumroh. Tani waa musiibo labaad ee xilli ciyaareedkii Hajj bishaan, ka dib markii ay burburtay saratoosiyuhuba (khafiyad / wiish) oo ay ku dhinteen 107 dad sodcaal ah, oo ay ku jiraan 11 sodcaal ka Indonesia.
Hadda mina musiibo ayaa ku dhintay 717 qof oo ku dhintay, 805 qof ayaa ku dhaawacmay, oo ay ku jiraan saddex qof oo ka Indonesia, Hamid ka Surabaya, asal Batam Saiyah iyo nin ka mid ka Probolinggo. Iran caabuda dilay sida ugu badan 43 qof, 60 qof. Inta kale ee dalalka.
Haddii aan eegno dhinaca diinta, eegin dayacaad ee element aadanaha, masiibo ee Mina, uma baxsan karo qaddar in ayaa la aasaasay by Ilaah.
Sida aan ognahay in Quraanka iyo Sunnaha, Eebe abuurayaa saddex nooc oo aayahooda.
Aayahooda ugu horeeya caadi ah in bangiyada ayaa dhigay Ilaah kitaabkii ku Sugantahay Mahfush, aayaha caadi Eebe u Banneeyey, aayaha kulli waxyaalaha noolnool oo 50,000 oo sano ka hor inta Eebe u abuuray Samooyinka iyo Dhulka, oo ay ku jiraan caleemaha ka dhacay laamaha horeba ku cad kitaabka Eebe,
Nabiga sallallaahu Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri: "Allaah ayaa dhan aayaha khalqiga oo dhan ka konton kun oo sano ka hor inta Eebe u abuuray Samooyinka iyo dhulka". (HR. Jirin Muslim. 2653).
"Ma jiro qof ay belaayaysan yihiin dhib ah oo Dhulka iyo (midna) Naftiinna, laakiin waa Qoran yahay Kitaabka ah (Lawh Mahfuz) ka hor waxay keeni. Sida runta ah waa u fududahay Eebe ". (. QS Al-Hadid: 22).
Aayahooda labaad waxaa lagu go'aamiyaa marka ruuxa la afuufi galay hooyada caloosha oo uur lahayd markay uurka afar bilood iyo toban maalmood, waqtigan ee Meyeydaan aayahooda aadanaha ayaa la go'aamin.
Masiirka saddexaad, fuinta aayahooda habeenka Laylat al Qadr, taas oo sida uu Quraanka iyo Sunnaha Ilaah habeen walba maalinta ugu dambeysa ee bisha Ramadaan (bisha soon) dhigay 10.
Habeen Laylat al Qadr waa mid aad u gaar ah, maxaa yeelay, markaan ahaa addoonkii Ilaah caabuda oo xalay abaal karaan (abaalmarin) oo u dhiganta waxaan caabudi u 83 sano.
Tani aayahooda preogatif xaq Ilaah, Ilaah keliya ayaa bedeli kara, Sidaas daraaddeed ayaa Ilaah wuxuu ninkii ku amray in badan oo ka mid ah salaadda iyo xuska, sababtoo ah mid ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah salaada waa in uu diidi karaa inuu xoojiyo (waxaan laga yaabaa inay ku ah doonista Ilaah la tudhay yaabaa masiibada).
(BBC) - Tirada dhimashada ee Mina in ka badan 717 oo qof, ku dhaawacmeen 805 oo qof.
Dadka dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaal ku dhow.
Ugu yaraan 700 oo sodcaal ku dhintay markii uu isku dayay inay ku tuuraan jumroh sarreysa ee Mina, halka 800 ay ku dhaawacmeen in ka badan ayaa Khamiistii (24/09).
Maamulka Saudi ayaa sheegay in 4,000 oo askari ayaa loo diray goobta oo ay la socdaan 200 shaqaale ee gargaarka degdegga ah.
Dhaawacan helay si toos ah kaalmada goobta oo isbitaal la geeyay dhaw.
Qiyaastii laba milyan oo Muslimiin Xajka ee Saudi Arabia, taas oo sanadkan ayaa sidoo kale by burburkii saratoosiye at dhacdo Mecca, kaas oo sababay in ka badan 100 dad sodcaal ah ayaa ku dhintay, oo ay ku jiraan 11 sodcaal ka Indonesia calaamadeeyay.
Wariyaha BBC ayaa sheegay in dad sodcaal ah badanuna wuxuu ku dhintay asal ahaan Niger.
Dhacdo ee Mina, kaas oo ka dhacay Iiddii Eid al-Adha, in aan ku xuso dalka hooyo ee khasaaraha ku dhacay.
Laakiin Hausa qaybta BBC ee, Tchima Illa Issoufou, oo ahayd goobta ayaa sheegay in dad sodcaal badan oo ka Niger dhintay.
Dhinaca kale wakiilada dowladda Indonesia ee Saudi Arabia ayaa dirtay koox si loo ogaado in dad sodcaal ah Indonesian ah kuwa dhibanayaasha dhacdooyinka ee Mina this.
Agaasinka Civil Difaaca ee Saudi Arabia ayaa sheegay in ay weli weli ma oga sababta musiibadan ka buuxeen.
2006, ayaa sidoo kale ka dhacay musiibooyin la mid ah la gaaray 364 dhimasho dad sodcaal ah.
Maamulka gargaar xaajiga oo ay ku dhaawacmeen.
Saraakiisha ammaanka, sida laga soo xigtay idaacadda Saudi dowladda TV, u sheegay oo ku saabsan 390 caabuda ay ku dhaawacmeen ilaa iyo haatan in dhacdada ayaa Khamiistii (24/09).
Dhacdooyinka ayaa ka dhacay markii dad sodcaal ah qabtaan dhagax lagu dilo Ibliiska, mid ka mid ah Xajka taxane ah oo ay tuuraya iskageliyay inay calaamad u tahay in la dhagxiyaa Ibliisku.
Hajj sanadkan ku soo xiga oo ku saabsan laba milyan oo dad sodcaal ah oo dunida ku baahsan.
Sanadkii 2006, gudaha hawadu ayaa sidoo kale ka dhacay Mina la dhibanayaasha gaadhay 346 oo qof.
Dhacdooyinkii maanta Ka hor, Xajka ayaa sidoo kale midab dayrta ee wiish la isticmaalay mashruuca ballaarinta Haram.
Qaadashada 111 xajka ku dhintay, oo ay ku jiraan muwaadiniinta 11 xajka Indonesian ay dhacdo Masaajidka Grand ah. King of Saudi Arabia ayaa balan qaaday in ay magdhow qoysaska dhibanayaasha kuwii dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay.
Dhibanayaasha wiish Haram 'ka faa'iidaysan karaan'
Dad sodcaal ah Family ku dhintay iyo naafo joogto ah oo sabab u ah burburkii iyo saratoosiye oo ka dhacay masjidka ku Jimcihii (11/09) qorsheeyay in ay magdhow ka King of Saudi Arabia, Salman bin Abdul Aziz Al Saud helaan.
Pilgrims ku dhintay, oo ay ku jiraan 11 muwaadiniinta dalka Indonesia, ayaa lagu soo waramayaa helaysaa gunnada 1 million oo lacagta riyal, ama ku saabsan Rp3.8 billion. Gaadhaya Magdhawga ayaa sidoo kale sheegay in la siiyo naafo joogto ah shirka.
Laakiin ilaa hadda, ayaa sheegay in Function Fulinta Pensosbud Qunsuliyadda Guud ee Jeddah Shariif u sheegay BBC-da ee Shahab Rohmatin Bonasir Indonesia, dowladda Indonesian ma helin wax ogeysiin rasmi ah oo ka socda dawladda of Saudi Arabia.
7 Mina musiibadii ugu qaracan badan ee taariikhda Hajj
Mina waxay leedahay taariikh dheer oo ah goobta musiibo ee ay ku dhinteen dad sodcaal ah oo badan.
Tani ma tahay musiibo koowaad uu ka dhacay ee Mina. Sidaa darteed, Mina waxay leedahay taariikh dheer oo ah musiibo in dad sodcaal badan ku dhinteen oo dhacay sanadihii hore. Ka dib markii musiibooyin ay ku dhinteen xajka badan oo ka dhacay Mina, Saudi Arabia.
1. July 2, 1990
Tani waa musiibooyin ugu qaracan in ka dhacay Mina. Waqtigaas, 1,426 dad sodcaal ah ayaa lagu dilay isriixidda ah in tunnel halka Mina.
Wadar ah 270 xajka ku dhintay in masiibada ku soo laabtay Mina. Musiibo ayaa ka dhacay markii dad sodcaal ah qabtaan dhagax lagu dilo Ibliisku ee Mina israac
3. 15 April 1997
Wadar ah 343 dad sodcaal ah ayaa ku dhintay iyo 1,500 oo kalena ay ku dhaawacmeen in ka sodcaal dab teendhadiisii ​​Mina. Wax ka baro musiibadan, waxaa haatan sheegtay in dad sodcaal ah teendhadii antiapi.
4. 9 April 1998
Wadar ah 118 xajka ku dhintay iyo 180 kalena ay ku dhaawacmeen in masiibada ka Bridge Jamarat markaad u socoto inay ku tuuraan jumroh israac ee Mina.
5. March 5, 2001
Wadar ah 35 xajka ku dhintay sabab u ah kawelwelidda hadda ku samayn doonaa dhagax lagu dilo Ibliisku ee Mina
6. January 12, 2006
Wadar ah 346 dad sodcaal ah ayaa ku dhintay iyo 289 kalena ay ku dhaawacmeen intii lagu ka mid ah dhagax lagu dilo Ibliiska. Shilalka ka dhacay ay sabab u tahay boqolaal dad sodcaal ah oo ay soo gaareen si ay u qabtaan israac ee isku la xajka kale ee buundada Jamarat ah. Barashada ka dhacdadan, dawladda Saudi Arabia ka badan Bridge Jamarat ka dib si dad sodcaal ah ma aha inay ka gurdamaya, halka tuuraya jumroh.
XIRIIRKA KA DHEXEEYA salaadda iyo dhikr
Dr. Nasir bin 'wali Max'ed bin Muhammad al-Juda'i
Inta u dhaxaysa labada xiriir aad u dhow, oo Allah ka baryaynaa in Subhanahu wa imtithaal lala dhikr isaga si, mase waa bidde ah si aad u codsato Eebihiis oo ku saabsan baahida iyada, labada temporal iyo Aakhiraba, foomka ah ee ra'yi dhiibashada xaaladaha iyo erayada.
Markaas salaadda ku jira dhikr mar, sidaa darteed sidoo kale loo yaqaan baryada xuska by dadka intooda badan. Waxaa loo baahan yahay in halkan sharxay, in dhikr ayaa in ka badan Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo isaga u ammaanayaa Salaadda, markaas waxaa fiican iyo hoose iyo sidoo kale mudan in la siiyo.
Imam Ibn al-Qayyim yiri, "disunnahkan The (mustahab) oo ku Tukan waa duco in ay bilaabaan do'anya la Mahadna Eebaa iska Subhanahu wa imtithaal, markaas bershalawat korkiisa Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii in codsiga waa la samatabbixin doonaa, oo markaas muujiyaan hawadiisa,  dheeraad ah oo uu ku xusan qaar ka mid ah dood ay ka Qisoon.
Haddaba-DHUFEYSKA (mid dooro foomka kaniisad ku taala si ay u helaan dhow-demin.) Eebe Subhanahu wa imtithaal in mid ka mid magacaygay ka Magacyada Ilaah waa u roon (al-Asmaa-ul Husnaa) ama mid dabiiciga ah ee Sifo waxaa sare (ash-Shifaatul 'Ulyaa) oo ku Tukan waa nooc ka mid DHUFEYSKA oggol yahay shareecada ee (at-alum-Sul al-masyruu'). Tusaale ahaan, Muslim odhan in uu salaadda, "O Eebe, Runtii waxaan kugu weydiisan, waxaad jecel, Mahalembut joogaba, i siiyo caafimaad Naxariista." Ama wuxuu yidhi, "Waxaan kaa baryayaa Nicmadaad oo ay ku jiraan wax kasta, deeqsinimo iyo dembiyada ku cafiyo oo aan. "
Sida tusaale muran ah ee DHUFEYSKA wuxuu amray noocan oo kale ah waa hadalka Eebe Subhanahu wa imtithaal:
"Waxa ay iska leh Ilaah Asma ul Husna-, ka dibna isaga bermohonlah adigoo wacaya Asma ul Husna-ahaa ..." [Al-xumihiinna: 180]
Ka mid ah doodaha iyo aasaaska kale waa sida Allaah ka qortay on Alaihissallam salaadda ee Boqor Sulaymaan wuxuu hadalkiisa:
"Haa ... Eebahay, iga sii agtaada waxyooday inay sii kaaga shukri naqo nimcada aad iigu nicmaysay Aniga iyo aabbahay iyo hooyaday yihiin laba qof oo si falay Camal wanaagsan in aad ridhai, iyo Igu quudi aad rah-derin galay fasalka Annagoo addoommadaada ah ee xaqa ah "[An-Naml: 19].
Sida doodaha Sunnah sida ku jira ash-Shahiihain ah (arooray al-Bukhaari iyo Muslim Abduh), ka Ibn Abbaas anhuma in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
"Allow, waxaan ka magangalay Kartid ammaan, qofna xaq uma laha in ay diibadahi laakiin adiga keliya, inaad i ilaaliyo." 
Qisadii ka 'Abdullah bin Mascuud Radi anhu in Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
"Ma aha qof welwel overwritten iyo murug iyo markaas, wuxuu leeyahay, 'O Eebe, waxaan ahay addoonkaaga, wiilkii (farac) anoo addoonkaaga ah (Adam), carruurta (masruufa) ka, Adoonkana addoon gabadhaada (Xaawo), sare madaxayga ku jira anoo gacantaada, go'aanada khusaysaa ii, kaa destinies ii tahay mid xaq ah, waan ku baryayaaye by magac kasta oo iska leh kuugu, oo aad na-cunista Is-aad isaga la, ama aad leedahay si aad baro anoo addoonkaaga ah uxuu aad, ama aad u dhaadhac-xaq kitaabkii anoo, ama aad tahay dadaalka badan inaad naftaada u ku maqan isa, inaad al-Aayado-ah sida qaboojiyaha qalbigayga iyo iftiinka naftayda , gargaariddu laraku iyo dhakhaatiirti walbahaar. "Markaas, Eebe wuxuu noqon doonaa in la baabi'iyo murug iyo murugo iyo bedesho ugu shugri naqo." 
Ka dib markii aan ku tilmaami qaar ka mid ah noocyada kala fudud ee dhikr, markaas waa in aan haatan ku xidhno doodan adigoo sharxaya foomamka of at-tabarruk (filan Barakada) iyada oo dhikr Eebe Subhanahu wa imtithaal (dzikrillaah bi) si nidaamka tabarruk la dhikr Eebe Subhanahu SWT sii kordheysa cad.
[Guuriyeen buugga Ugu Tabaruk Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu, Title in Practices Indonesian Oo wakhtigii waa barakaysan yahay, Author Dr. Nasir bin 'wali Max'ed bin Muhammad al-Juda'i, Publishers Reader Ibn Kathir]
Posted by needsjobslowongankerja at 12:28 PM